Halista Dastuurka Cusub ee Qabya qoraalka Somalia | Anti-Tribalism
← Wasiirka Dastuurka oo Qaab Qabiil u difaacay dastuurka Puntland sheegayna kan qaranka Soomaliyeedna mid KMG ah
Halkee Mareysaa Siyaasada Shiikh Shariif iyo Cabdiweli Gaas (Warbixi Dheer) →
Halista Dastuurka Cusub ee Qabya qoraalka Somalia
April 22, 2012- (Moment Media Group) -Dastuurka cusub ee la doonayo in laga ansixiyo shirka wadatashiga Soomaaliya marka si degan loo akhriyo wuxuu halis ku yahay wadajirka iyo Cadaalada beelaha Soomaaliyeed.
Dastuurka oo saldhig looga dhigay 18-ka Gobol oo ay Soomaaliya ka koobneed ka hor xiligii dagaalada sokeeye dalka ka dhaceen, 18-kaas gobol oo aan ahayn gobolo markii horeba cadaalad lagu sameeyay, ama loo fiiriyey dhul ahaan ama dadka ku nool tiradooda, goboladaas oo qaarkood lagu magacaabay arin siyaasadeed oo ay xiligaa Dawladdii Milateriga Maxamed Siyaad Barre “Camalkiisa allaha ka waraabiyee” Dalka ka lahayd.
Dastuurka waxaa lagu cadeeyay in ugu yaraan labo Gobol oo buuxda kaliya ay noqon karaan Maamul/Dawlad Goboleedyada la rabo in dalka laga hergeliyo iyada oo aan cod laga qaadin shacabka Soomaaliyeed.
18-ka Gobol ee jiray xiliga Dawladii Hore ayaa haddii labo labo la isku saaro waxaa dalka ka soo baxaya ilaa 9 dawlad goboleed, Dawlad goboleed yada ka soo baxaya haddii Goboladaas sidaa la isku raaciyo ayaa si Cad ugu hor imaanaya heshiiska aan lagu wada qanacsaneyn ee 4.5 oo ay Soomaalidu ay sanadihii ugu danbeeyay wax ku qeybsanaysay.
Dastuurka cusub waxaa ku qoran in Magaaladda Muqdisho ka mid noqon karin maamul goboleedyadda ,loona sameeyn doono sharci gaara maadama sida lagu xusay dastuurka qabyada ay Muqdisho tahay Magaalo Soomaali oo dhan ka dhaxaysa.
Muqdisho waxaa ku nool shacab qiyaas ahaan ka badan bulshada ku nool todobo gobol oo ka mida goboladda Somalia.
Dastuurka cusub wuxuu Xooga saaray in Goboladii 18-ka ahaa laga dhigo Saldhig iyada oo la og yahay in 18-kaas gobol dadka ku nool ay si aad ah u kala duwan yihiin.
Sida Xeeldheerayaasha qiimeeyay sheegeen Dastuurka cusub wuxuu abuurayaa colaad hor leh oo Soomaaliyeed isaga oo dhiirigelinaya Dawlad goboleedyo qabiileysan,
Waxaa la og yahay in gobolo aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay wada degan yihiin qabaa”il aan siyaasadda isku raaci karin, qabiil kastana uu isku dayayo inuu qabaailka la degan meesha ka saaro.
Dastuurka sida uu hadda u qoran yahay hadii lagu ansixiyo waxaa ku dulmanaan doona Beelaha Hawiye, Dir, Digil iyo Mirifle , Beesha 5-aad iyo beelo ka mid ah Beelaha Daarood.
Danta ugu weyn ugu Jirtaa Maamulka Puntland akhristow ma aqrisay dastuurka maamulka puntland lagu asnixiyay mise ogtahay in dastuurkaa uu yahay mid qayaano qaran ku ah midnimada umada soomaali oo isagu ugu yaraan haysta Dawlad goboleed la jaan qaadi kara Dastuurka qabyada sida Gobolka Bari, Gobolka Nugaal, Qeyb Mudug ah iyo qeyb sanaag ah.
Maamulka Puntland waxaa hogaamiya beesha Majeerteen,iyada oo Beelaha tiro ahaan la” eg Beesha Majeerteen ama ka badan aysan u suurta galeynin iney helaan Dawlad goboleed iyaga metela, maadaama qabaa”ilka la eg ama ka badan Majeerteen aysan heli karin Labo gobol oo Nadiif ah,marka la raaco nidaamka 18 Gobol.
Beesha kaliya ee heli karta 2 gobol oo nadiif ah waa Digil iyo Mirfle, Gobolada Bay iyo Bakool, inkastoo beeshu wax ka degto gobolo kale, Haddana waxey noqonaysaa in dawladda lagu dhisi doono Dastuurkaas ay noqoto in Beelaha Digil iyo Mirifle iyo Majeerteen ay isku miisaan yeeshaan iyaga oo aan isku miisaan ahayn nidaamka 4.5-ka iyo tiro ahaanba.
Beelaha tiro ahaan la eg ama ka badan Beesha Majeerteen oo aan heli doonin Dawlad goboleedyada Dastuurkaasi Xambaarsan yahay waxaa ka mid ah:-
Beelaha Abgaal, Habargidir, Xawaadle,Murursade , Mariixaan, Ogaadeen, Gaaljecel, Sheekhaal, Duduble, Leelkase, Warsengeli, Beelaha digil, Mirifle, Dhulbahante, Gudubiirse, Dir Koofur iyo beelo kale oo badan maadaama aysan jirin beel kaliya ee degan 2 gobol oo nadiif ah oo aan dad kale la degenayn.
Dastuurka cusub waxaa galaangal awood badan ku leh Beelaha qaar maadaama hay”ádda diyaarintiisa gacanta ugu weyn ku leh ee UNDP aysan shaqaalaha u shaqeeya aheyn meel Beelaha Soomaaliyeed u siman yihiin.
Dastuurka cusub iska daa inuu Xal u keeno Soomaaliye waxuu abuurayaa caqabad ay Soomaalidu isku haysato 50-ka sano oo soo socota.
Sida sharciyadda Caalamka ku qoran Dastuurka Dalka Soomaaliya loo sameeyay 1960-kii , waxaa la bedeli karaa marka cod laga qaado shacabka Soomaaliyeed.
Dhaqaalaha lagu bixinayo Dastuurka cusub oo Nairobi lagu diyaariyey waxaa dalka looga samayn karaa amaan iyo kala danbeyn,iyadoo kadib lagu qaban karo gudaha Somalia doorasha xora oo qof kasta u yahay xor inuu codkiisa dhiibto.
Soomaalida u qeybsan qabiil hoosaadyo ayaan ku heshiin karin Maamul Goboleedyo labo labo gobol isku raacsan kuna salaysan 18-kii gobol, waxaana xaqiiqo ah haddii dastuurkaan dalka sharci looga dhigo in dalka ay ka dhici doonto dagaalo sokeeye oo aan dhamaanin.
Waxa kaliya oo Soomaalidu xal ku heli karta ayaa ah, in amaankii la soo celiyo, markaas kadibna doorasho loo qabto umadda Soomaaliyeed, ama Degmo kasta oo Maamul samaysata la taageero markii amni guud la helana la dhiso dawlad dhexe oo metesha umadda soomaaliyeed oo ku timaada Doorasho xora.
Isku soo wada duube Dastuurka diyaarsan ee Nairobi lagu hayo oo ay tahay waxa shirarka wada tashiga lagu sheegay loo qabanayo oo lacagaha faraha badan loo bixinayo ,waxay wadaniyiinta Soomaaliyeed ugu magacdareen Baas abuur cusub
Faalo Qotobka 3aad oo oranayo in dalka laga dhigo Federal ku salaysan 18kii gobol ee horay u jiray..
Gobolladii Dowladdii Milateriga ee Siyaad Barre
Dowladdii uu hoggaamiyaha iyo madaxweynahaba u ahaa Jeneral Maxamed Siyaad Barre waxay dalka la wareegtay sanadkii 1969 iyadoo uu markaa dalku ka koobnaa siddeed gobol. Muddadii 21-kasanoahayd ee uu dalka ka talinayey Jeneral Maxamed Siyaad Barre wuxuu ku daray toban gobol. Haddaba waxaa isweydiin leh kororsiimadan muxuu nidaamku ku salaynayey?
Runtii lama garanayo qaabka uu Kacaanku raaci jiray marka uu abuurayo gobollo cusub. Nin odoy ah oo ka tirsanaa maamulkaas ayaan weydiiyey halbeegga la adeegsan jiray marka la samaynayo gobol ama degmo cusub. Ninkaasi wuxuu iigu jawaabay “dalka waxaa heystay nin keliteliye ah, wuxuuna u maamuli jiray sida uu u arko sax isagu. Gobollada iyo degmooyinka iyo go‟aannada kale ee waaweyna isaga ayaa samayn jiray.”
Waxaa arrintan sii xoojinaya sheeko aan ka maqlay Cabdulle Raage Taraawiiloo ahaa halabuur caan ku ah bulshada dhexdeeda. Cabdulle Raage oo hadalka cajal ku duubay wuxuu ka sheekeyey dood dhexmartay isaga iyo Jeneraal Maxamed Siyaad Barre. Cabdulle Raage wuxuu leeyahay waxaa ii yeeray Madaxweyne Maxamed Siyaad Sanadkii 1990 oo ku beegnayd xilligii ay saxiixeen odoyaashu warqad ay ugu baaqayaan in uu Jananku is-casilo (Manafesto Group).
“Siyaad Barre ayaa wuxuu igala hadlay arrimaha warqaddan iyo qabiillada ka danbeeya,” ayuu yiri Cabdulle Raage. Siyaad Barre wuxuu igu yiri buu Cabdulle leeyahay, “Waxaa ii heshiiyey Majeerteen iyo Habargidir, marka waxaan doonayaa inaad tolkaa ka reebto arrintan oo aad idinku (qabiil ahaan) wax igala qabataan oo aad Kacaanka taageertaan.” Waxaan ku iri, ayuu Cabdulle Raage ku leeyahay cajaladda, “dadka saxiixay warqadaha kuma jiro qof aan aniga heybta hoose (Daa‟uud) isku nahay.”
Wuxuu intaas raaciyey, labo kulan oo kale iyo dood dheer kadib ayuu Siyaad Barre igu yiri, “waxaan degmo kaaga dhigayaa meeshii aad ku dhalatay oo magaceeda la yiraa Ruun Nirgood.” Cabdulle Raage wuxuu leeyahay waan ka diiday arrintaas Madaxweyanaha waayo waxaan weydiistay inuu degmo ka dhigo meeshaan10 sano ka hor, wuuna ii diiday. Dabadeed, sida uu cajaladda ku sheegayo, Cabdulle Raage wuxuu billaabay inuu goobta ka tiriyo gabay dheer oo uu Kacaanka ugu abaalsheeganayo wixii uu u galay iyo sidii uu Kacaanku ugu jisaaray ee uu ii xiray. “Markii aan gabaygii dhameeyey ayuu Siyaad Barre yiri, „waxaan ku darayaa Warshiikh.‟” Markaas baan ku iri, “Caadley ku dar.” Siyaad Barre wuu diiday arrintaas waayo wuxuu yiri waxaa la iga laayey askar Caadley, laakiin waxaan ku darayaa Biyacado. Isku soo duuboo, sida uu cajaladda ku sheegayo, Cabdulle Raage iyo odoyaal la socday waxay habeenkaas ka saxiixeen Jeneral Maxamed Siyaad Barre afar degmo.
Marka la fiiriyo gobolladii iyo degmooyinkii la abuuray iyo sheekadaniba waxay ku tusayaaninuusan jirin halbeeg la raaci jiray oo ay ku xirnayd Jeneral Siyaad Barre xaaladdiisu sida ay tahay. Marka haddii sidan gobollo lagu sameeyey lagu duldhiso nidaamka federaalka waxaa ka imanaya dhowr cilladood. Tan hore, waxaa laga tagayaa caddaaladda waayo waxaa jira gobollo dadka deggen uusan nidaamkii milatarigu jeclayn xilligaas, iyo gobollo kale oo dadkoodu aysan baraarug siyaasi ah lahayn. Labadan arrimood oo iskaashaday waxay keenayaan in la sharciyeeyo wax aan ku iman nidaam sharci ah ama aan caqligu qaadan karin.
Haddii xitaa la isku oggolaado oo la aqbalo 18 gobol, ma ahan suurtagal dhaqaale ahaan in lagu saleeyo nidaamka federaalka. Tusaale, ma jirto awood dhaqaale ama aqooneed oo ay Soomaalidu ku wadi karto18 baarlamaan, 18 xukuumadood, 18 ah boliiska gobollada, 18 ah maxkamado kala duwan, iyo 18 ah shaqaale dowaldeedyada gobollada. Waxaa arrintan diidaya awoodda dhaqaale iyo tan aqooneed ee hadda jira.
Sida uu ii sheegey qof xog-ogaal ah, waxay dowladda KMG ah (xilligii dowladdii Carta) isku dayday inay baahiso maamulkeeda. Gobollada iyo degmooyinka qaar ayaa muujiyey inay doonayeen inay raacaan nidaamka Carta lagu soo dhisay. Xukuumaddii Dr. Cali Khaliif Galayr ayaa waxay ku tiri degmooyinkaas “idinku qorta boliis oo dhaqaalo ahaan isa-sii dabbara intii muddo ah, annaguna waxaan idinka kaalmayn doonnaa waxyaalaha kale.” Waxay sheegeen mas‟uuliyiintii degmooyinkaas inaysan awoodin inay qortaan boliis. Weliba degmooyinka qaarkood waa kuwa lagu tuhmo inay ugu roon yihiin degmooyinka dalka dhaqaalo ahaan.
Haddaba, marka si kasta oo loo fiiriyo laguma salayn karo nidaamka federaalka 18 gobol. Laakiin, haddana waxaa jirta in dastuurka Dowladda KMG ah ee xilligaas jirtay ay ku qoran tahay in nidaamka federaalka ah lagu saleeyo 18 gobol.
Waxaa iyaduna xiiso gaar ah leh cayaarihii gobollada ee lagu qabtay Garowe, caasimadda Puntland. Runtii, waxay ahayd dhacdo weyn oo ay ku ammaanan yihiin bahdaisboortiga iyo shacabka iyo dowladda Puntland. Laakiin xiisaha gaarka ah ee ay dhacdadani u leedahay doodda la xiriirta nidaamka federaalka waa in dad badan oo Soomaaliyeed ay isla oggol yihiin gobolladii uu kacaanku ka tagay, loona arko inay sharci ahaayeen. Runtiina, dhacdadan waxaa laga daliishan karaa in aragtida taageeraysa 18-ka gobol ay ka culus tahay kuwa kale.
Waxaan rumaysanahay inay taasi horumar tahay. Hayeeshee, anigu sideedaba ma qabo in nidaamka federaalku ka shaqayn karo dalka. Haddii la samaynayana waxaan qabaa inaan gobolladu ka badan afar, la iskuna raaciyo hab ku salaysan qaaciddooyinka dhaqaalaha iyo horumarka.
Dastuurka Maamulka Puntland iyo Dastuurka Qabyo Qoraalka Waa Qayaano Qaran!
April 21, 2012- Haddii aan dib u milicsano Dastuurka Puntland waxaa u qorayaa in Puntland tahay dowlad madaxbanaan sida ku cad Dastuurka,haddii aan soo qaadano qodobo faro badan wax aad arkeeysaa sida wax loo qoray in aay tahay teeyda anaa leh taadana kula lehi.
Kheeyraadka dabiiciga qodobka 53 aad waxaa lagu sheegay:
1. Khayraadka dabiiciga ah ee Puntland waxaa leh dadka Puntland, waxaana looga faa’iideeysan karaa si waafaqsan sharciga. (Puntland Somali ayaa leh khayraadkeedana Somali ayaa leh.)
2. “Dawladda” Puntland ayaa ka mas’uul ah ilaalinta iyo ka faa’iidaysiga Khayraadkeeda dabiiciga ah. (Dowlada dhexe awoodeeda in Gobol sheegtaa waa qalad.)
3. Dawladda Puntland waxay heshiis la geli karta Shirkado waddani iyo Ajnebiba ah waxayna siin kartaa ruqsadda ka faa’iidaynta khayraadka dabiiciga ah.(Teeyda anaa leh taadana kula lehi sow maaha?)
4. Ruqsad kasta oo la xiriirta ka faa’iidaysiga khyraadka dabiiciga ah waxaa bixinteeda soo habaynaaya Golaha Xukuumadda waxaana oggolaanaya Golaha Wakiillada.
5. Qaabka saami qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee Maamulka Puntland waxaa qeexaya xeer gaar ah oo uu Golaha Xukuumaddu u gudbinaayo Golaha Wakiilada si uu u ansixiyo.
Qodobada qaar waa kuwa laga naxo sida: Qodobka 1-aad: Magaca Dawladdu waa Dawladda Puntland ee Soomaaliya.(Micnaha Dowlad goboleed maaha ee waa Dowlad?)
Dadka dawladda Puntland waa dadka haysta jinsiyadda Puntland. (ma Qabiil baa jinsiyada maxeey tahay sow Somali maaha ma Ethiopian baa??)
2. Muwaadinnimada Puntland waxaa difaacaya sharci gaar ah, waxaana qeexaya xeer gaar ah sida lagu heli karo ama lagu waayi karo jinsiyadda Puntland.
Waxaa ugu darnaa uguna foosha xumaa iswaafijinta dastuurka Puntland iyo dastuurka Federaalka ee Somaliya sida aay u dhigeen,haddii aad aqriso waa wax umada aay ku ah ceeb iyo xishood dari iyo jahli aad ugu fog,waxaa ku qornaa sidaan
1. Marka dadweynaha Soomaaliyeed afti ku meelmariyo Dastuurka Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya, ayaa Golaha Wakiillada ee Puntland wuxuu magacaabayaa guddi gaar ah oo ka kooban xubno ka tirsan Golaha Wakiillada iyo xubno isugu jira Aqoonyahanno sharci iyo
Garsoorayaal ay xukuumaddu soo jeediso, si ay dib u eegid ugu sameeyaan dastuurka puntland una hubsadaan arimaha ay ku kala gadisan yihiin labada Dastuur, inta aynan ogolaan Dastuurka Fedaraalka. 2.Inta lagu dhammaystirayo Dastuur federaal ah oo Puntland ansixisay (ratified), dabadeedna afti dadweyne lagu meelmariyey, Puntland waxay lahaaneysaa awood Dawlad madaxbannaan
Barnaamijka cusub ee uu wato C/weli waa mid laga dhaxlay C/aahi Yusuf oo aanan biyo lagu dhaqin,waxaa umada aay la yaaban tahay hab-dhaqanka r/wasaare C/weli oo aad mararka qaar is leedahay sow ninka ma xishooda miyaa ??? haddii uusan waaleeyn waa xishoon lahaa ,dib u aqri maqaalka magaciisu yahay Proff C/weli maxaa u wehliya aqoontiisa 1,2,3,
Waxaas oo idil waxaa maleegay Mahiga.Faroole iyo C/weli oo u adeegaya danaha Puntland, geeridii C/aahi waxaa aay dhashay in siyaasad cusub uu abuuro C/weli kuna hoydo Gaalkacayo si uu u mideeyo Gaagaab,Faroole iyo Cabdillaahi Siciid Samatar oo ahaa ragii isku haysaty dhaqangelinta dastuurka Puntland iyo xiliga kala guurka Puntland.
Waxaa xaqiiq ah in C/weli bixiyay 20 Malyan oo Dollar si loo xaliya siyaasada Puntland laguna midoobo ujeedada danaha fog ee C/weli ka leeyahay dib u dhiska Puntland,Gaagaab maxaa aamusiyay ???
Waxaad mooda in dhana uu ugu ololeeynayo dastuurka qabyo Qoraalka si loo asixiyo dhanka kalena Puntland uu u diray wasiiro Dowlada Federaalka ka mid ah si loo soo ansaxiyo,odoyada Puntland oo dhawaan iman doona Muqdisho waxaa aay wadaan olole ah in loo codeeyo dastuurka qabyo qoraalka halka umada inteeda kale aayan ka warqabin danaha fog ee Puntland ka leedahay u codeeynta dastuurka qabyo Qoraalka.
Somaliland iyo Puntland dastuur ayeey leeyihiin umada inteeda kale maxaa u diiday dastuur u gaar ah maxaase loogu qasbaayaa in aay ansixiyaan dastuurka qabyo Qoraalka ah??? Shariif waxaa jirtay xili uu carfayay oo la lahaa shariif waa amiir iwm maantase waa urayaa sabbabta oo ah waxaa uu ka fogaaday cadaalada umada Somali waxaana uu hog dheer ku riday rajadii dib u soo celinta Qarankii Somali.
Sh.Shariif in uu Garoowe ka doonto taageero siyaasadeed kulana heshiiyo siyaasad Somalida inteeda kale ku ah cadaalo daro iyo sadbuuri waxaan ku tilmaani karaa Hagarsi,waxaa hubaal ah in shariif uusan aqrin dastuurka Puntland iyo midka qabyo Qoraalka ah, Ninkii tiisa daryeelaa tu kale ku dara.
Alow sahal umuuraha
Maamulka Puntland iyo Mahiga waa in dalka laga qabtaa…(Waxay noqotay hadalheynta Soomaalida)
Wax dood ah kama taagna Runtii in dalkii iyo dadkiiba la haysto laakiin su’aasha u baahan in sifiican looga jawaabo ayaa waxa ay tahay yaa dalka iyo dadka heysta..?goormaase la qabsaday…?
Waxaa maal mahaan danbe dhagaha bulshada Soomaaliyeed caadi ku noqotay,Soomaaliya waxaa maamula oo go’aanadeeda ay ka fulaan beesha caalamka,Mahiga iyo qaar ka mid ah wadamada jaarka.
Sidoo kale waxaa bulshada Soomaaliyeed maal mahaan danbe dhagahooda kusoo dhacaya arayo ay kamid yihiin waxa dalka maamula oo uu faraha ugu jiraa maamulka Puntland, C/raxmaan Faroole iyo qabiilka horbooda maamulka Puntland.
Shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba gudaha iyo dibada waxay bilaabeen muddooyinkaan danbe guux ku aadaan in taladii dalka ay isagu uruurtay gacan shisheeye iyo beelo kooban,iyadoo mar walbana farta ku godayaan Mahiga iyo maamulka Puntland.
Inkastoo cabashooyinka ay qabaan bulshaweynta Soomaaliyeed aan halkaan lagu soo koobi karin,balse waxaan soo qaadanaayaa dhowr arimood oo xasaasi ah.
Beesha caalamka ayaa dalka soomaaliya waxa ay ku amartay in raacaan nadaamka loo bixiyey Road maapka,nimdaam kasoo qatar weyn ku ah qaranimadii Soomaaliya.
Xildhibaanadii baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa loogu baaqay in aysan is hortaagin Road maapka,waxaana loogu hanjabay in xabsiga la dhigi doono.
Sidoo kale waxaa maal maahaan danbe si xowli ah ku socda dastuur ay ajaanib soo diyaariyeen,balse beelo gaar loogu daneynayo,waxaana wadatashiyo aan loo dhameyn uu ka dhacay magaalooyinka Garoowe iyo Gaalkacyo.
Dhinaca kale bulshada Soomaaliyeed waxa ay la yaab ku tilmaameen dastuur dhawaan loo sameeyey maamulka Puntland,marka aad u kuurgasho datuurka Puntland waxaa kuu soo baxaya siyaasad guracan ay ku tilaabsadeen maamulkaasi.
Shacabka Soomaaliyeed oo muddo aad u dheer kusoo jiray dagaalo iyo jahwareer siyaasadeed ayaan xilligaan u diyaarsaneyn isbadala siyaasadeed ee ay beesha caalamka ku qasbayaan,waxayna cod dheer ku sheegeen in laga wada qeyb galiyo beelaha Soomaaliyeed oo dhan wadahadala socda, si loo helo wax soomaali oo dhan ay ku qanac santahay.
Maamulka Puntland oo taageero buuxda ka helaya shaqsiyaad iyo dowladdo dano gaar ah ka leh dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in ay masiirkii Soomaali oo dhan ay jeebka ku riteen,waana midda hadda keentay in shacabka Soomaaliyeed qura meel kastaba ha joogaane ay hal mar afka furteen.
Madaxweyne sheikh shariif oo ka hor yimid dastuurka cusub ee Puntland sheegayna soomaaliya in ay hal dastuur leedahay
20.04.2012 (MMG) – Madaxweynaha Jamhuuriyada Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed ayaa kasoo horjeestay Dastuurka Cusub ee maamulka Puntland, madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in Dastuurka Puntland uu yahay mid qilaafaya dastuurka Dowladda KMG soomaaliya taasina uu ku tilmaamay in ay caqabad ku noqoneyso isla saan-qaadka bulshada iyo maamulada soomaaliweyn.
Madaxweynaha ayaa Dastuurkaasi ku tilmaamay in uu yahay mid cadeyneysa Gooni isku taag maamulka Puntland arrintaasina ay fadeexo ku noqon karto dowladda KMG soomaaliya oo uu ku sheegay in haatani ay talada dalka gacanta ku heyso, madaxweynaha ayaa ku baaqay in waxbadan laga badalo Dastuurka Puntland islamar ahaantana dib loo ansaxiyo.
Hadalka madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa imaanaya xili Dowladda KMG ay ku mashquulsantahay xal u helida mideynta Siyaasiyiinta iyo Bulshada Somaliland oo iyagu lagu wado in ay qeyb ka noqdaan dowladda KMG oo talada dalka haysa, ma jirto hadal rasmi ah oo kasoo baxay maamulka Puntland kaasoo ku aadan hadalka uu ka dhawaajiyay madaxweynaha walow wararka halkaasi naga soo gaaraya ay sheegayan in mudanayaal ka socda maamulka Puntland ay madaxweynaha iyo golaha wasiirada ay kulan kula qaadan doonaan magaalada muqdisho iyaga oo la filaayo in dastuurkaasi ay hor dhigi doonaan islamar ahaanta u jeedada dastuurka ay uga warbixin doonaan.
Ugu danbeyntii madaxweynaha oo horay ugu qanacsanaa Dastuurka Puntland ayaa waxa iminka soo baxaaya hadalo ku aadan dastuurkaasi waxaana la sheegaya in dastuurkaasi ay qaadacen qaar katirsan Beelaha halkaasi kasoo jeeda.
Wasiirka Dastuurka oo qaab qabiil u difaacay dastuurka Puntland sheegayna kan qaranka Soomaliyeedna mid KMG ah
21.04.2012 – Wasiirka Dastuurka Soomaliya deegaan ahaan ka soo jeeda Puntland ayaa siweyn u difaacay dastuurka ay sameysatay Puntlnad xili madaxweynaha Soomaaliya uu ganafka ku dhuftay Dastuurka Puntlnad .
Wasiirka Dastuurka iyo arimaha Federaliga ee DKMG Cabdiraxman Xoosh Jibril ayaa isagu qaab qabaiil ku doonayo xiligaan in la hoos yimaada Puntland madaama ayba ka horeeyaan dhan walba siyaasada dowlada Dhexe waxaana muuqata wasiirka Dastuurka Soomaaliya uu jira xiir hoose oo ka dheexya Faroole iyo isaga taana waxaa cadeen u ah dooda maanta uu ku taageeray mamaulka Puntland in uu la ogyahay sirta qarsoon ee laga leeyahay dastuurka cusub ee Soomaliya.
Aniga oo ah wasiirka Dastuurka ah waxba uma arko calanka iyo Dastuurka Puntland waxaana dooda maanta laga dareemayey in uu ahaa wasiirka Afhayeen ka socda Puntland.
Wasiirka ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliya qabya uu yahay 8 sana doodiisa ay socon doonta taana waxay ka hor imaneysa in xiligaan la helo dowlad aan kumele gara aheyn madaama dastuurka lagu dhaqayo uu yahay mid kumele gaar ah.
Dhanka kale Dr Cali Khaliif kale oo dooda ka qeyb galay ayaa gashaanka u daruuray dastuurkaas qabyada ah isagoona sheegay in dan qaas ah laga leeyahay dad qaas ahna loogu shaqeynaya dasturka qabyada ah.
HALKAN KA DHAGEYSA DOODA